Booqashadii Obama oo ka hadalka arimaha Suuriya afduubtey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booqashadii Obama oo ka hadalka arimaha Suuriya afduubtey
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 14.43
Shaley waxaa Iswiidhen booqasho ku yemid madaxweynaha Mareykanka Brack Obama. Waxuuna kulmo kalo gedisan la yeeshey xukumada Iswidhen iyo madaxda waddamada waqooyiga Yurub sida Danmark, Norwge, Island iyo Findlanda. Balse booqashada Obamada oo Iswiidhen fileysey in looga hadlo arimaha suuqa xorta ah iyo cilmida ayaa waxaa gebi ahaanba la wareegey arimaha la xiriira qorshaha weerar ee Mareykanka damacsanyahey in uu ku qaado dalka Suuriya ogalaaansho la’aan QM. Arintas oo dalal badan oo calamka kamid ah ayna ku jirto Iswiidhen aad looga dhalceysanyahay.
Sida tan ayuu yeri Fredrik Rienfeldt wasiirka koobad Iswiidhen mar uu ka soo baxey casho asaga iyo madaxda kale ee waddamda waqooyiga Yurub la qaateen Obama.
- Waxaan u muujiyey in aan fahansanahey kaalinta Brack Obama, waa madaxweynaha Mareykanka, meel kastoo caalamka ay dhibaato ja dhacdo waxey dadka oo dhan ka doonayaan in Mareykanka wax ka qabto. Hadii ay wax ka qabadku Mareykanka meesha ka maqnaadana waa mid leh caqabadaheeda siyaasadeed. Obama arintaa si wanaagsan buu noogu sharaxey, in aan la dooneynin in loo muujino diktetarada caalamka in ay ok tahay isticmaalka hubka sunta ah ficil celina la’aan. Waa isku dheelo tirka arihaman mida noo muujisey in kaalinteeda kalo gedisantahay taas oo aan meesha ka sheegay ayuu yeri Rienfeldt.
Waddankan Iswiidhen ayaa waxaa ka jira is-faham siyaasadeed oo ah in nidaamka QM loo maro araiamah Suuriya. Urban Ahlin oo ah xog-haya arimaha dibada ee xisbiga mocaaradka ah Socialdeomkrterna ayaa ku dhaleeceyey Reanfeldt fahamkiisa Obama. Balse Reanfeldt ayaa dhaleeceytaas uaga jawaabey in mar hadii golaha amniga QM uu yahay hada mid baralays ka waxa caalamka ka dhacaya ah ayna jirt baahi ah in Marekanka iyo Obama wax ka qabtaan rajimyada isticmaalaya hub sunta ah.
Kulankii dhex marey xaley Obama iyo rasiisal wasaarayaasha waddamada waqooyiga Yurub ayaa waxaa lasyku afgartey in lixda waddan ay sannad kasta qabsadaan kulan loog arinsanayo arimaha la xiriira amniga caalamka. Sida uu yeri madaxa xisbiga Muderatka ahna wasiirka koobaad dalkan Iswiidhen Fredrik Reanfelt arintii ugu muhimsaneyd oo laga wado hadley inta ay socotey booqashada Obama waxey aheyd sidii hor-u-mar looga gaari lahaa heshiis dhanka suuqa ganacsiga xorta ah oo dhex mari doona USA iyo midowga Yurub oo la qosheyna in uu mar dhow dhaco.
- Hadii aan fursad u helno in aan Mareykanka arintaan wado xaajood kalo yeelano markaas waxaan u cadeynayaa dadka Iswiidhen in wax aan ahmiyada siinayo ay tahay shaqada iyo hor-u-marka Iswiidhen. Hadii aan hor-u-mar ka gaarno wado xaajoodka suuqa xortaha ah waxey dhaqaalaha Iswiidhen taas uga micno noqon doontaa ayada loo la garaacey albaadka shaqooyinka mustaqbalka. Ayuu Reanfeldt.
Intii Obama booqasahada ku joogey Stockholm waxuu booqdey xarunta macbadka yahuuda ee Stocholm asaga oo qodbad ka horjeediyey taalada xasuus xuska Raul Wallenberg, sidoo kale waxuu booqdey jamadaca KHT ee ku taala bartamaha Stockholm. Fiinimadii xaleyna waxuu casho la qaatey madaxda waddamada waqooyiga Yurub sida Danmark, Finland, Island, Iswiidhen iyo norwy. Saakey barqadiina inta uusan duulin waxuu la kulmey boqarka Iswiiden.
Qiimo ballaaran ayay booqashada Obama dalkan ugu fadhiday
Denis: Obama ballammadii uu qaaday kama aanu soo bixin
Saxaafada caalamka oo indhaha ku heysa booqashada Obama
Obama oo booqan doona maanta taalada xasuus xuska Raoul Wallenberg
Obama oo cagta soo dhigey dhulka Iswiidhe
Diyaarada sidey Obama oo hada soo cago dhigatey Arland